युवालाई हृदयाघात- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ २०, २०७४ डा. राजेन्द्र कोजु
३३ वर्षे चालक दिनभरको कार्यपछि थकान मार्न आफ्नो वासस्थान फर्किन्छन् । छातीमा केही भारी भएको महसुस गर्छ । र पनि थकाइले होला भनेर खाना खाएर सुत्छ । राति खासै सुत्न सक्दैन— छाती हल्का भारी भएकोले राति पानी तताएर खाने, उठेर बस्ने, टहलिने र यताउति गरेर रात बिताउँछ । भोलि जाउँला भन्ने मनस्थितिमा हुन्छ ।
बिहान हुनासाथ नजिकैको मेडिकलमा जान्छ । मेडिकलले केही झोल, ट्याबलेट दिनुको सँगसँगै नजिकको अस्पताल जान सल्लाह दिन्छ । अस्पताल पुगेपछि जाँच–पडतालबाट थाहा हुन्छ, हार्ट एट्याक भएको । चिकित्सकबाट छिटो आउनुपर्ने हल्का गाली पनि पाउँछ— छिटै रोग निदान र उपचारले मुटुको नराम्रो असर कम हुनेबारे ।
२८ वर्षको व्यापारी, पसलमा बस्दा–बस्दै छातीमा गहु्रँगो भारी भएर आउँछ । चिटचिट पसिना छुट्छ । ए यो के भयो भन्दै यसरी बसांै, उसरी बसौं गर्छ । छाती भारी घट्दैन । सँगैको मेडिकलमा सोध्छ । मेडिकलले अस्पताल जाने सल्लाह दिन्छ । आफन्त बोलाएर तुरुन्त नजिकको अस्पताल जान्छ । इमरजेन्सीमै गरेको ईसीजीले देखाउँछ, हार्ट एट्याक भएको । तुरुन्त उपचार सुरु गर्दा विस्तारै राम्रो भएर आउँछ ।
३० वर्षको कर्मचारी अफिसमा काम गर्दागर्दै छाती भारी भएको अनुभव गर्छ । यदाकदा साथीभाइहरू माझ छाती भारी भयो भने हृदयाघात भएको हुनसक्छ भन्ने थाहा पाएर तुरुन्त सहकर्मीको मद्दतमा अस्पताल पुग्छ । इमर्जेन्सीको चिकित्सकले जाँच–पडतालसँगै ईसीजी गर्दा हृदयाघात भएको जनाउ दिँदै उपचार सुरु गर्छ । र आवश्यक उपचारपछि दैनिक जीवनयापनमा फर्किन्छ ।
धेरैलाई अझै पनि विश्वास हुनसक्छ—हृदयाघात पाको उमेरकालाई हुन्छ । हृदयाघात पुरुषमा मात्र हुन्छ । हृदयाघात धनीलाई मात्र हुन्छ । महिलामा पनि उत्तिकै जोखिम छ । अनि मध्यम वर्ग एवं गरिबमा पनि । तर वास्तविकता अर्कैतिर मोडिइराख्या पनि छ । पाको उमेरकालाई पक्कै पनि सम्भावना एवं खतरा धेरै छ । तर वयस्क युवाहरूमा पनि हृदयाघात हुनसक्ने सम्भावना बढ्दैछ । यी यस्ता घटना हालसालै नियमित रूपमा देखिइराखेका छन् ।
मुटु रोगको छलफल, जनचेतनामूलक सन्देश, चिकित्सकको अन्तर्वार्ता, लेख आदि–इत्यादिले सहरी वासिन्दा सचेत भएका छन् । सो अनुसार आवश्यक अस्पतालमा पुगी उपचार गराइरहेका छन् । तर अझ पनि कति जनता थाहा नपाएरै वा बेवास्ता गरेर समस्या झेलिरहेका छन् । मुटुको रोग युवा अवस्थादेखि किन बढिरहेका छन् त ?
कारण— जीवन शैलीमा आएका परिवर्तन प्रमुख वैज्ञानिक आधार भएको पाइन्छ । हाल जीवन शैली अलि भिन्न नै भइराखेका छन् ।
- अद्यिक चिल्लो, नुन, चिनीयुक्त (फास्ट फुड, जंक फुड, हल्का पेयपदार्थको सेवन) । म:म:, पिज्जा, चिजयुक्त मकै, कोक, चिप्स, फ्राइड चिकेन आदि–इत्यादि ।
- बस, मोटरसाइकल, कार अन्य यातायातका सुविधाका कारण हिँडडुल कम । वा शारीरिक व्यायाममा कम ।
- चुरोट, खैनी खाने बानी
- रक्सी सेवन
- वतावरणीय प्रदूषण
- अधिक तनाव
यी कारणहरू अति महत्त्वपूर्ण छन् । यद्यपि भन्दासुन्दा साधारण देखिन्छ । यी कारणहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तपाई हृदयाघातबाट डराउनु हुन्छ भने यो सबै चिजबाट बच्न सक्नुहुन्छ । तर कुनै कारण यस्तो हुन्छ, जुन तपाईले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न । जस्तै– वंशाणु, उमेर, लिङ्ग ।
यी नियन्त्रण गर्न नसकिने कारणसँगै अरु कारण पनि छन्, जहाँ स्वस्थ जीवनयापन संँगसँंगै उपचारको पनि आवश्यकता पर्छ । जस्तै पनि नियान्त्रण गर्न मिल्ने । जस्तै–
- उच्च रक्तचाप
- रगतमा चिल्लोपना अधिक (डिसलाइपेडिमिया)
यी माथिका कारणहरू उचित तरिकाले नियन्त्रण गर्न सक्यो भने धेरै हदसम्म हृदयाघातलाई कम गर्न सकिन्छ । हामीले यो पनि जान्न जरुरी छ कि, हृदयाघात हुँदा हुन्छ के ?
- छाती भारी हुन्छ, छाती फुलेर आएको भान हुन्छ
- छाती दुख्छ
- छाती गह्रुँगो हुन्छ
- छातीमा अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ
- श्वास फुल्छ
- सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ
- एक्कासी गाह्रो भएर आउँछ
- पसिना आउँछ
- मुटुको ढुकढुकी बढ्छ ।
यस्तो भयो भने समयलाई खेर नफाली सकेसम्म चाँडो अस्पताल पुगेर आवश्यक जाँच गरिहाल्नुपर्छ । कहिलेकाहीं केही नभएर पनि हृदयाघात हुनसक्छ ।
अस्पतालमा शारीरिक जाँचसँगै तुरुन्तै गरिने प्रक्रिया यस प्रकार छन् ।
- ईसीजी— हृदयाघात हो–होइन भनेर हेर्ने यो पहिलो जाँच हो ।
- रगतको जाँच— ट्रोपोनिन, सीकेएमबी— हृदयाघात भनेको मुटुको मांसपेशीमै असर पर्ने हो, तसर्थ मुटुको मांसपेशीमा असर परेको छ–छैन भनेर पत्ता लगाउन ।
- इको काडियोग्राफी— भिडियो एक्सरेबाट मुटुको अवस्था हेर्न ।
यसरी हार्ट एट्याक भएको हो–होइन भनेर निश्चित रूपमा निदान गर्न सकिन्छ । आवश्यतका अनुसारको विभिन्न औषधी सुईहरू दिनुपर्छ ।
हो भने तुरुन्तै उपचार सुरु गर्नुपर्छ । आईसीयु वा सीसीयुमा राख्नुपर्छ । सम्भव भएको अस्पतालहरूमा एन्जियो ग्राफी (मुटुको रक्तनलीको अवस्था हेर्ने प्रविधि) गरी आवश्यकता अनुसार एन्जियो प्रलास्टी गर्ने ।
हालसालै मुटुको उपचारमा केही सहज भएको छ । यद्यपि यो सबै सेवा सबै असपतालमा उपलब्ध नहुनाले गाह्रो पनि छ ।
उपचारपछि पनि आफ्नो जीवन शैलीमा परिवर्तन गरेर नियमित औषधीहरू खाइराख्यौं भने रोग नलागेको व्यक्तिजस्तै जीवनयापन गर्न पनि सम्भव छ ।
हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्यको ध्यान दिँदा साधारण तर महत्त्वपूर्ण कुराचाहिँ रोग लागेपछिको उपचारभन्दा रोग लाग्ने सम्भावना नै कम गर्ने हो । जुन आफ्नो जीवनयापनमा स्वस्थकर बानी–व्यहोरा अवलम्बन गरेर । यो वर्षको सुरुवातमा स्वास्थ्यमन्त्रीले पनि अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, + ५ वटा कुरा । त्यसैलाई व्यवहारमा ल्याए पनि निकै राम्रो गर्न सकिन्छ । साथसाथै चिकित्सकको सल्लाह अनुसार नियमित नछुटाई औषधी सेवन गर्नुपर्छ ।
कोजु मुटुरोग विशेषज्ञ हुन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७४ ०८:१७
किन खाने चुरोट ?
चैत्र २४, २०७३ डा. राजेन्द्र कोजु
यो लेख चुरोट खानेका लागि पनि हो, नखानेका लागि पनि हो । चुरोट खाँदा के हुन्छ ? सबै खानेलाई पनि थाहा छ, नखानेलाई पनि थाहा छ । तैपनि एकपल्ट सरसर्ती हेराैं । खाँदा के हुन्छ ?
खोकी लाग्न सक्छ ।
श्वास गनाउँछ ।
अनावश्यक पैसा खर्च हुन्छ ।
नखानेले मनपराउँदैन, जसमा आफ्नै परिवार मुख्य पर्छ ।
क्यान्सर हुन सक्छ ।
हृदयाघात हुन सक्छ ।
पक्षाघात हुन सक्छ ।
दम लाग्न सक्छ ।
मृगौला, कलेजो, जोर्नी, आन्द्रा, स्नायु, रक्तनली जस्तै शरीरका सबै अङ्गमा नकारात्मक असर परी रोग लाग्न सक्छ ।
तैपनि खानेले खान्छ । यसका नकारात्मक असरबारे न्युन हेक्का राखेर ।
केका लागि ?
आफ्नै बानी परेको हुनाले ।
साथीहरूको लहलहैमा ।
खाई हेर्न भन्दै ।
अरूलाई देखाउन । आदि–इत्यादि हुन सक्छ ।
खानको लागि खासै भन्ने हो भने केही अत्यावश्यक कारण हुन्न, तैपनि खानेले छोड्न गाह्रो हुन्छ । किन त ? किनकि यसमा लत बस्ने निकोटिन हुन्छ, जसको कारण खाने बानी परेकाले छोड्न गाह्रो हुन्छ । निकोटिनको लतले खान तलतल लागिरहन्छ । तसर्थ माथि उल्लेख गरिएका कुनै पनि कारण दिमागमै आउँदैन– चुरोट खायो भने क्यान्सर हुन्छ, दम हुन्छ, हृदयाघात हुन्छ भनेर ।
त्यसैले बानी पर्नुभन्दा पहिला, लत लाग्नुभन्दा अघि नै चुरोट भनेको खाने वस्तु नै होइन भन्ने धारणा बनाउन अति जरुरी छ ।
मुख्यत: वयष्कहरू जसले एकपल्ट तानिहालौं भन्ने, ह्या यस्तो रोगको के मतलव, अहिले तानौं पछि हेरौंला, चट्ट चुरोट च्यापी आकाशतिर हेरेर धुवाँ उडाउँदै गफ गर्ने, एक हातमा चुरोट अर्काे हातमा रक्सीको गिलास समाउने, केटाकेटी, पार्टीमा चुरोट तान्ने आदि–इत्यादि अक्सर नै चुरोट खान सुरु गर्नुको कारण बन्छ । पछि त्यही बानी नै लत लाग्न सुरु हुन्छ । यस्तो सुरुवातको अन्त्य गर्न विभिन्न स्तरबाट जनचेतनामूलक प्रचार–प्रसार सुरु नभएको होइन । तर पनि चुरोटको लत भने घटेको देखिँदैन ।
सिनेमामा चुरोट नखान सल्लाह ।
चुरोटको नराम्रो असरबारे विज्ञापन ।
चुरोटको बट्टामा क्यान्सरको फोटो ।
चुरोट खान नपाइने क्षेत्रको घोषणा ।
तर खान लत बसेकालाई यसको कुनै मतलब हुँदैन भने खान सुरु गर्नेले यसबारे भेउ नै पाउँदैनन् । खानु हुँदैन थाहा छ, तर पनि खान्छन् । खाँदै खाँदिन भनेर कसरी रोक्ने वा सुरु नै नगर्ने त ? चाहिन्छ, दृढ संकल्प । दरिलो कारण । गहिरो बुझाइ । सकारात्मक वातावरण । यो कसले बनाउने ? आफैंले । यदि चुरोट छोड्न चाहनुहुन्छ भने आजै भनौं : म कहिल्यै छुँदै छुँदिन । चाहे विज्ञापन होस् वा साथीको करकाप, तलतल होस् वा बाध्यता ।
तपाई आफै बाध्य हुनुस् । तपाईको शरीरको लागि यो चुरोट भन्ने चिज खाने नै होइन भनेर । खाने मान्छेले त विस्तारै छोड्छु कहिल्यै नभनौं । चटक्कै छोडौं ।
प्रा. कोजु धुलिखेल अस्पतालसँग आबद्ध छन् ।
प्रकाशित : चैत्र २४, २०७३ ०८:०८